Tag: sumadaynta Martech Zone
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Ururradu inta badan waxay adeegsadaan feylasha vector-ka ee shati haysta oo laga heli karo goobaha sawirrada lagu kaydiyo. Caqabadu waxay timaaddaa markay rabaan inay cusboonaysiiyaan dammaanad kale oo urur gudahood ah si ay ula jaanqaadaan qaabaynta iyo sumcadda la xiriirta astaamaha ama astaamaha horay loo sii daayay. Waqtiyada qaarkood, tani waxay ku imaan kartaa isbeddelka sidoo kale… mararka qaarkood naqshadeeyayaasha cusub ama ilaha wakaaladda waxay la wareegaan nuxurka iyo dadaalka naqshadeynta urur. Tani dhawaan ayey inala dhacday markaynu shaqada la wareegnay
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Mid ka mid ah aagagga aanan maalgashi ku sameysneyn ayaa ah boggan. In kasta oo wakaaladaydu lahayd astaan ​​weyn oo aan jeclahay, oo aan la shaqeyno dhammaan macaamiisheenna ku saabsan magacyadooda, haddana ma aanan haysan xarig ballaadhan oo aan kaga shaqeeyo Martech Zone sumadda… ilaa maanta. Astaantii hore ee "M" waxay asal ahaan ahayd waxyar oo wax laga beddelay sawir aan ku soo iibsaday si deg deg ah ka dib markii aan beddelay bogga. Waxay ahayd wax iska cad, mana matalin wax, iyo
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Saaxiibbaday waxay jecel yihiin inay waqti adag igu siiyaan inaan noqdo qof sidan u jecel Apple. Waxaan si daacad ah ugu eedeyn karaa dhamaan saaxiibkey wanaagsan, Bill Dawson, oo ii iibsaday qalabkeygii ugu horeeyay ee Apple - AppleTV… ka dibna ila shaqeeyey shirkad aan nahay maamulkii ugu horeeyey ee badeecadaha adeegsada MacBook Pros. Waxaan ahay taageere ilaa iyo hada, banaanka Homepod iyo Airport, waxaan hayaa qalab kasta.
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Qiyaastii bil ka hor, waxaan helay inaan kaqeyb galo kulanka fikirka suuq geynta macmiilka. Waxay ahayd mid fantastik ah, la shaqeynta latalin caan ku ah horumarinta khariidadaha waddooyinka ee shirkadaha tikniyoolajiyadda sare. Maaddaama khariidadaha la horumarinayo, waxaan la dhacay waddooyinka gaarka ah iyo kuwa lagu kala duwan yahay ee kooxdu la timid. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale go'aansaday inaan sii wado kooxda inay diirada saarto suuqa bartilmaameedka. Hal-abuurnimadu waa istiraatiijiyad muhiim u ah warshado badan maanta, laakiin
Jimco, Juun 1, 2018 Tara Kelly
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Alexa, oo ah kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee codka leh ee Amazon, wuxuu wadi karaa in ka badan $ 10 bilyan oo dakhli ah dhowr sano gudahood. Horraantii Janaayo, Google waxay sheegtay inay iibisay in ka badan 6 milyan oo qalab Google Home ah tan iyo bartamihii bishii Oktoobar. Kaaliyeyaasha caajiska ah sida Alexa iyo Hey Google waxay noqonayaan muuqaal muhiim u ah nolosha casriga ah, taasna waxay siisaa fursad la yaab leh oo loogu talagalay noocyada inay kula xiriiraan macaamiisha barxad cusub. U hamuun qabashada fursaddaas, magacyadu way degdegayaan